Tiradii ugu badneyd oo maalin qura u dhimatay cudurka Corona - BBC News Somali
Image caption Markabka ay dadka saaran yihiin
"Waxaan u heysanay in aan usoo dhawaanay dalalkeena balse uma aanan heysan in nala soo eryayo," ayuu yiri Angela Jones oo u dhashay dalka Mareykanka, kana mid ah dadka saaran markabka.
Haseyeeshee go'aanka Dowladda Cambodia ay kusoo dhaweysay markabkaas ayaa waxaa soo dhaweeyay hey'adda caafimmaadka adduunka ee WHO.
Dhawaan ay ahayd markii Dowladda Shiinaha ay shaqada ka eriday mas'uuliyiin sarsare, kadib markii ay sheegtay inay ku guuldareysteen wax ka qabashada caabuqa Corona ee ka dilaacay dalkaasi.
Xanuunkan oo ay u dhinteen dad gaaraya kun qof ayaa mas'uuliyiinta shaqada ku waayay waxay kala yihiin xoghayaha xisbiga talada haya u qaabilsan guddiga caafimaadka ee Hubei iyo gudoomiyaha guddigaasi.
Mas'uuliyiintan ayaa noqday kuwii ugu sarreeyay ee shaqada guddiga caafimaadka laga eryo, waxaana sidoo kale shaqadiisi waayay agaasime ku xigeenka hay'adda laanqeeyrta cas ee dalka Shiinaha.
Mas'uuliyiinta shaqada laga eryay ayaa la sheegay in lagu bedali doona kuwo kale oo heer qaran ah.
Image caption Dowladda Shiinaha ayaa lagu dhaliilay habka ay u wajahday xanuunka Corona
Dadka shaqo ka tirista ay saameysay waxaa kale oo kamid ah madaxa guddiga caafimaadka ee Huanggang oo ah magaalada labaad ee uu sida ba'an u saameeyay cudurka.
Muddooyinkii dambe, mas'uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa lagu dhaleeceeyay wax ka qabasha la'aanta cudurka iyo sida ay ula tacaaleen.